iPhone Chete Cheji MuLaptop Kana Mota, Kwete Iyo Rusvingo: Iyo Gadzirisa! - Kubhadharisa
apple id password inoramba ichibuda
sprint inobata vatengi vatsva 2017
foni kesi kana pasina kesi
Yako iPhone inobhadharisa kana yaiswa mu USB port pane yako laptop kana mota, asi haibhadharise kana yabatana nechaja yemadziro. Huh? Wakaedza tambo dzakasiyana uye majaja akasiyana, asi yako iPhone haizobhadharise kana yaiswa mune yekubuda. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei yako iPhone isingabhadharise kana yakabatana nemadziro ekubuda , edza kutsanangura sei zvakaitika, uye tsanangura iko kushanda kugadzirisa dambudziko iri risinganzwisisike.
Kana yako iPhone isingabhadharise zvachose , tarisa chinyorwa changu chinonzi Yangu iPhone Haizobhadharisi kuti uwane rubatsiro rwauri kutsvaga.
Ndakafunga kunyora chinyorwa ichi mushure mekunge vanhu vaviri vandibvunza mubvunzo iwoyo muPayette Forward Nharaunda. Ndakaita googling ndikaona kuti vanhu vazhinji vakawana dambudziko iri, asi ini handina kuona mhinduro chaidzo. Heano maitiro ekuti dambudziko rinowanzo kuzviratidza sei:
“IPhone yangu haibhadharise kana yabatana nechaja yemadziro. Inongobhadharisa kana yakabatana ne laptop kana mota yangu charger. Ndakaedza kutsvaira tambo nemachaja emadziro, asi hazviite mutsauko. '
Pakutanga ndakafunga kuti yaive nyaya neyechitatu-bato tambo kana madziro -jaja, asi iyo yanga isiri iyo. Vese vanhu vaishandisa tambo dzeApple-dzakapihwa matchaji. Kugadzira zvinhu kunyangwe zvimwe kuvhiringidza, tambo imwe chete nemachaja ayo aisashanda nemaPhones avo yakashanda zvakakwana nedzimwe iPhones.
Iri raive dambudziko rinonyengera kugadzirisa. Ini ndaiziva kuti panofanirwa kuve nemusiyano pakati pekuchaja iPhone mumadziro nekuchaja uchishandisa komputa, asi chaive chii? Iyo komputa, mota, uye iPhone wall charger zvese zvakaburitsa 5V (volts), asi gare gare ndakazoona vasiri chaizvo zvimwe chete.
Magetsi Kune Emagetsi-Akadenhwa
Handina kunzwisisa kwepamusoro-soro kwechimiro chemagetsi, asi ndakamboverenga fananidzo iyo yakandibatsira kutanga kubata pfungwa yemagetsi uye amperage. Hezvino izvi:
Magetsi achiyerera nepaseya akafanana nemvura inoyerera nepombi yemubindu. Iyo dhayamita yeiyo hosi inofananidzwa ne amperage, mukuti inogadza huwandu hwemvura kana magetsi ayo anogona kuyerera nepombi kamwechete. Iko kumanikidza kwepombi kunoenderana nemagetsi, nekuti ndiyo inogadza kumanikidzwa kwemvura kana magetsi anoyerera achipinda muchigadzirwa chako.
Hazvisi ese mashanu Volt majaja Akafanana?
Kiyi yekugadzirisa dambudziko iri iri mukunzwisisa kuti haasi ese mashanu majaja akafanana. Musiyano uripo pakati pemachaja hausi iwo magetsi. Ndiyo amperage.
Iyo iPhone wall charger, malaptop, uye 2.1A iPad charger . Fungidziro yangu ndeyekuti dunhu riri mukati me iPhone yako iro rinosiyanisa pakati pemamperages rakanganisika, saka yako iPhone inongogamuchira yakaderera mari inogoneka. Izvi, zvakadaro, ingori dzidziso.
Inogona here IPadjaja Inokuvadza Yangu iPhone?
Kwete iPhones dzakagadzirirwa kubata amperages epamusoro kupfuura iyo 500mA kana 1A yakaiswa nechaja yemadziro. Apple's 12V iPad charger inoburitsa 2.1 amps uye inoenderana zvizere neese iPhone zvinoenderana nezvinotaurwa neApple zviri pamutemo .
Sezvo amperage inotarisa huwandu hwemagetsi inoyerera kuburikidza newaya, iyo inowedzera iyo amperage, iyo inokurumidza yako kifaa kuchaja. iPads ichachaja ichishandisa iPhone charger, asi ivo vanozochaja kaviri nekukurumidza kana iwe ukashandisa yepamusoro-amperage iPad charger. Nekudaro, dzimwe nyanzvi dzinoti kuchaja lithiamu-polymer mabhatiri pane akakwirira amperages kunogona kupfupisa hupenyu hwavo hwese.
Ndingaite Sei Kuti Ndigadzirise Iyo iPhone Isingazobhadharisa Kana Yakabatanidzwa Mumadziro?
Zvinosuruvarisa, kana simba rekuisa magetsi regwara rakakuvara pane iPhone, hapana chaunogona kuita kumba kugadzirisa dambudziko. Asi iwe hausi zvachose kunze kwerombo.
Kunyangwe iyo 1A Apple madzirojaja isingashande, unogona tenga 500ma madzirojaja kuAmazon izvo zvinoburitsa pachena amperage yako iPhone unokwanisa gamuchira. Haisi mhinduro yakakwana, asi zviri nani zvakanyanya kupfuura kutsiva yako yese iPhone.
Izwi renyevero: Ini handina kumboedza iwo maamjaja eAmazon 500ma ane iPhone mune ino mamiriro, nekuda kwekuti ini handina imwe ine dambudziko iri. Ini handina 100% chokwadi che 500mA wall charger ichashanda, asi ini ndinofunga zvakakodzera kuedza kwe $ 5. Iwe unozviedza, ndokumbira undizivise kuti zvinoshanda sei!
Kana iwe uri pasi pewarandi, rwendo kuenda kuGenius Bar kuApple Store yako inogona kunge iri mugwara.
iPhone & Wall: Pamwe Chete
Isu takafukidza zvakawanda muchinyorwa chino, uye pari zvino, iwe unoziva izvozvo iwe unokwanisa kuchaja yako iPhone mumadziro, chero bedzi iwe uchishandisa 500mA charger. Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda nezve zvemukati zvechaja ye iPhone, ichi chakadzama chinyorwa chine a Yakazara kubvarura-yako iPhone charger . Kune hunyanzvi hwakawanda hwetekinoroji hwakarongedzwa mupaki shoma iyoyo!
Ini ndanzwa kubva kune vamwe vanhu vanoti hupenyu hwavo hwebhatiri hunoratidzika kunge hwanyanyisa kubva pavakatanga kuona dambudziko iri. Kana iwe uchinetseka nazvo zvakare, chinyorwa changu nezve sei kuchengetedza iPhone bhatiri hupenyu inogona kubatsira zvakanyanya.
Ndinoda kunzwa zviitiko zvako nekuchaja yako iPhone mumadziro, kunyanya kana wakatarisana nedambudziko iri. Kana iwe wafunga kudaro